Xeer-dejin iyo Xukuumad is-xanbaar ah
You are here: Home Home Xeer-dejin iyo Xukuumad is-xanbaar ah
‘Tabaaragga’ iyo Tiirka ‘Bir’ ah…….Waa tusbax kale…….waa taxanaheennii oo tufkii iyo taxliishiiba wata…….Tummaati inagu soo maqan ayaynu ka sii tabaabushaysanaynaa si aanay inoo taf-wareemin……
(Gorfaynta Xeerka Sir-doonka Qaranka: Xakamaynta Qawlka iyo Qalinka)
Riwaayaddii ‘Kala-haab’, 1966kii,
Bilowga iyo Ballaysinka:
‘Tabaaragga’ iyo Tiirka ‘Bir’ ah…….Waa tusbax kale…….waa taxanaheennii oo tufkii iyo taxliishiiba wata…….Tummaati inagu soo maqan ayaynu ka sii tabaabushaysanaynaa si aanay inoo taf-wareemin…….Si aynaan tubta toosan uga lumin waa aynu is-tilmaamaynaa is-na toosinaynaa…..Maantana toddobku wuxu ka dul hoorayaa Xeer la taseeyay oo tubtii uu lahaa, kii u talin lahaa ee taakuleyn lahaa kala tallaabay.
Qudhu waa ‘qabax’ iyo quud aan qoryo loo guran…..Qabo waa in qummaati loo carbiyay iyo qaniinyadoodii…….Qolo waa higsad loo quluulay oo qiyamkii suubbanaa iyo qarannimadii lagu qasaalay…….Laba aan is-qaban…….Laba aan isu qalmin……Waa laba aan is-qaadanayn……Qof kasta oo isku qaldaa qufac aan hadhin iyo qunbacashuu ka qaadaa…….Xilliyada qaar waa dhadhaabtii dhamacda loo quudhay ee Dun-carbeed kala qaab dhigay kana qayliyay in aan la isku qaldin……Laba aan la isu quudhin oo aan isu qalmin: Waa Qaran iyo Qabiil……Qacdu waa qori…..Qabtu waa qufullada albaabbadii qadhabida lahaa…..Qamtu waa laambadihii kolka horeba qiiqayay oo la bakhtiiyay…….Qaaqdu waa qowsaarradii la qallaxay ee ay nabarradu qudhmeen…..Qaylada iyo hayaaydu waa quruumo ka qaylinaya qawlallada dhawaan la hoolinayo in la qodbo……Qiriricdu waa diric birtii qoobabka loo sudhay xubnihiisii kala qaartay……Qasuumadu waa barbaarta qulubka la luudaysa ee doonyaha qayrkood la qarraqmay ka qoommamoonaya……Qamuunyadu waa debnaha qarracanka foolasha goostay ee qiirada la qal-dhebaya.……Qiyaamuhu wuxu ka joogaa qalinka la doonayo in dawaaddii habaysay la kala qariyo.……Qayladu waa shacbi qowdhamay oo aan qarqarsi iyo qoor-qabad midnaba biyo ku qudh-qudhin……Waa
dadkii qoriga iyo kaaraha qafilan qaaraha ku furtay……..Qun baa lagu dhaqaa ummad ee qallooc laguma dayo……..Qaniimadda Qarankuna qurbaan iyo qadhiidh u noqon meyso qof moodaya in ‘qusum’ wax lagu qaybsanayo.
Waa qormooyin kooban oo taxane ah oo aan dadweynaha Somaliland ku hoga-tusaaleynayo in aynaan maanta nooleyn xilliyadii Siyaad Barre ee dadka la xuuraami jiray ee la dabo-geli jiray. Waa qormooyin kooban oo taxane ah oo aan dawlad iyo dadweynaba ugu muujinayo in aynaan ku jirin xilliyadii guuxa iyo dareemmada laga tarjumi jiray, bal se aynu ku jirno xilliyadii la doobinayay ee la dhibi-shaxanayay. Maxaa la xuuraamaa haddii qallaylkaba la iskugu xiirayo oo aan waxbaba la kala qarsanayn. Maxaa ciidan, adduun iyo tamar kaleba laga luggoynayaa, kol haddii uu qofka wax maaggani ‘daahir yaa shamis’ kula hor imanayo wuxu tabanayo. Ma cid baa wax qarsata, sow ta TV-yada iyo war-baahinta kale laga doobinayo. Xuuraanku xaggee ayuu markaa ka imanayaa. Mise anigaan wax ogeyn e’ qaaddiradii qaxar ina soo maray ayaa weli ina wada haysa, markaas ayaynu jibbada la qal-dhebaynaa. Bal adba!
Waa qormooyin kooban oo taxane ah oo aan ku qaadaa-dhigayo: halka uu ka yimid Xeerka Sir-doonka qaranku? Halkii lagu soo kariyay iyo intii xansaska iyo xaabada lagu huriyaba u doontay? Inta gacmood ee iska beddeshay diyaarintiisii? Asalkiisu halka uu ka yimid iyo afafkii laga soo minguuriyay qalin-daraalayntiisa? Inta lagala dhuuntay ee xaq u lahayd ogaanshihiisa, intii la dhuumatay, intii u dhuumatay iyo sida aan la iskaga xil-saarin oggolaanshihiisa ee la inoogu qariyay.
Waa qormooyin kooban oo taxane ah oo aynu ku eegayno sida ay iskugu dhex daateen Golaheennii Wakiillada iyo Golaheennii Xukuumadda ee kormeerka iyo dabo-galka isku lahaa. Ma maqli jirteen: “Heedhe dhanna inooma fayooba.”
Xilow ba’! Haddii xaynka loo sudhay nimaan xilba dhibayn……Nimaan xilba solin…….Nimaan ku xasilin…..Nimaan ku xamdiyin. Nimaan xeer iyo xaagaanba wixii uu lahaa aan marin. Wixii laga xishoon jiray ayaa lagu xarragoonayaa. Oo weliba inta xariir loo xidho lagu xafladaynayaa. Niman aynu xulannay oo xoolaheennii ku doorannay ayaa xilkoodii baal-maray oo Xeerkan ina xidh-xidhaya inagu xeeriyay. Xil-dhibaanno ayaynu u naqaannaa. Lixdankii markii la is-raacay waxa loo yaqaannay ‘Dibitaatiyaasha’ iyo ‘Anuun baa nool.’ Magac iska baxay ma ahayn, bal se wuxu ahaa mid loo xiddigiyay. Lixadannadii waxay wadan jireen nimankaasi baabuur yar yar oo u badnayd Fiat, 1,100 (millecente D ama R) ah. Waxa baabuurtaa yar yar ugu oolli jiray lambar laga horreysiiyay AN. Labadan xaraf waxay u taagnaayeen ‘Assemblea Nazionale’ oo af Talyaani ahayd una dhigmaysay ‘National Assembly’ oo loo tarjumi karo ‘Golaha Shacabka’. Shacbigu markii ay arkeen dhaqankoodii dad-nacaybka ahaa iyo sidii aanay ummaddii soo dooratay dan uga lahayn, waxay shacbigii ku suntadeen: ‘Anuun baa Nool.’ Sidaas ayay dadku isku waafajiyeen lambarkii ay siteen iyo dhaqankoodii danayn la’aanta, dillaalnimada iyo dadnimo-ka-baxa ahaa. Sida raha loo
arko xilli-roobaadka, ayaa iyagana loo arki jiray marka ay doorasho jirto oo keliya, sida immikaba mararka qaarkood dhacda. Markaana hadhuudh cas-casaa oo kii fardaha la siin jiray ahaa ayay dadka ula iman jireen.
Intaas kuma ay koobnayn e’, maansooyinkii iyo heesihii halkudhegyada noqday ayaa raacay. Sow tii Cabdillaahi Suldaan, Timacadde lahaa: